South Africa Inoti Vabvakure Vachabaiwavo Nhomba yeCovid-19
Hurumende yeSouth Africa yakazivisa kuti vanhu vese vari mu South Africa vachakwanisa kubaiwa mushonga wenhomba, kana kuti vaccine, wekudzivirira chirwere che Covid-19.
Izvi zvinotevera gurukota reSouth Africa rinoona nezvehutano, VaZweli Mkhize, vazivisa kuti South Africa ichangobaya mushonga uyu pazvizvarwa zveSouth Africa chete, kwete vabvakure.
Mushure mekushorwa zvikuru nenyanzvi dzezvehutano nemasangano anorwira kodzero dzevanhu, mutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, vakazivisa neMuvhuro kuti vanhu vakuru vose vari munyika iyi vachabaiywa mushonga uyu zvisinei kuti zvizvarwa zvekunyika ipi.
Sangano reHuman Rights Watch, iro rakashoravo zvikuru hurumende yeSouth Africa payakange yataura zvekusarura vabvakure mukudzivirira chirwere ichi, rinoti izvi ndizvo zvinotarisirwa kuitwa munyika dzose, kusanganisa muSouth Africa.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kwe Africa, VaDewa Mavhinga, vanoti sezvo South Africa ine mbiri yekusarura vabvakure, sangano ravo richange rakatarisisa kuona kuti South Africa inoita here kana kuti kwete, zvayavimbisa kuita izvi.